मुकुन्द घिमिरेले गरे गगन थापाको क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उमेदवारीको घोषणा | Chitrawan Khabar
मुकुन्द घिमिरेले गरे गगन थापाको क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उमेदवारीको घोषणा
अनि गगन थापाकै क्षेत्रमा चाहीँ किन ? उहाँलाई हराउन सक्नुहोला ?
कति भोटले गगन थापालाई जित्ने अनुमान गर्नुभएको छ त ?
गिरिजाले मदन भण्डारीलाई जिताए, मलाई शेरबहादुरले जिताउँछन् भन्न खोज्नु भएको हो ?
अनि तपाई पार्टी खोलेर चुनाव लड्ने कि स्वतन्त्र उठ्ने ?
मुकुन्देले चर्चामा आउनलाई मात्रै यो घोषणा गरेको भनिरहेका छन् नि अरुले त ?
– साभारः नेपाल प्रेस ।